Ku-deeqidda - Cuntooyinka giraangiraha
Ku deeqahaaga ayaa isbeddel keena.
Markaad wax ku tabarucdo Cunnooyinka Taayirada, waxaad samaynaysaa qaybtaada si aad u abuurto bulsho ay waayeelka ku noolaan karaan guriga inta ugu badan ee suurtogalka ah Iyada oo cunto kasta qiimaheedu yahay $6, in yar oo ah $30 waxay ku siin doontaa cunto nafaqo leh iyo hubin badbaado sare u baahan.
Samee ballanqaad joogto ah oo ku saabsan gaarsiinta cunnooyinka nafaqada leh waayeelka xaafaddaada adoo waqti iyo waraaqoba ilaalinaya.
Guryeynta iyo Deeqaha Hantida
Baro sida aad ugu sameyn karto hadiyad qorshaysan Cunnooyinka Lugaha Lugta leh oo aad uga tagto dhaxal ah inaad siiso cunno nafaqo leh oo guriga la geeyo oo waayeelka u baahan.
Iswaafajinta Goobta Shaqada
Kordhi awoodda deeqdaada ee xagga cuntada caafimaadka leh ee waayeelka adoo weydiiya loo-shaqeeyahaaga ku-habboonaanta deeqaha.
Ku raaxayso faa'iidooyinka ugu badan ee canshuurta oo ku deeqo deeqdaada xagga caafimaadka, cuntada nafaqada leh ee dadka waayeelka ah sii dhaaf.
Boosto ama Telefoon
Ugu deeqo Cuntada Taayirrada boostada ama taleefanka uguna keen cunno nafaqo leh waayeelka bulshadaada.
Ku haynta macluumaadkaaga mid aamin ah oo aamin ah ayaa aad muhiim noogu ah. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Amniga iyo Amniga ayaa faahfaahin ka bixinaya tallaabooyinka la qaaday si loo ilaaliyo macluumaadkaaga shaqsiyeed iyo kuwa maaliyadeedba.
Deeq-bixiyeyaasha Su'aalaha la Weydiiyo
Su'aal ma ka qabtaa ku deeqa cunnada Cunnada? Halkan ka hel jawaabaha.
"Cuntada giraangiraha waxay ina dareensiisaa fiicnaan. Maskaxda ayay noo tahay. Waxaan u maleyneynaa inay tahay indho kale."
– Barb, daryeelaha hooyadeed Elaine, oo ku hesha Cuntooyinka Taayirrada